एपेक बैठक : चीन – अमेरिका विवादले घोषणापत्र जारी भएन::न्युज बिहानी
TRENDcongress nekapa samachar
पप्पु सहित २६ कम्पनीलाई कर तिर्न अल्टिमेटम
प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका खुंखार डाँका’ काले पक्राउ
नेकपा रामेछापको जिल्ला कमिटी सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक (नामावली सहित)
यातायात समितिलाई ५ दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता गर्न महासंघकाे अल्टिमेटम
त्रिशूलीमा बस खस्दा पाँचजनाको मृत्यु, २९ जना घाइते
नुवाकोटमा शनिबार देखि ‘पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कृषि प्रदर्शनी मेला’ शुरु (फोटो फिचर)
सरकार लुम्बिनीको विकासमा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री ओली
दिगो शान्ति, सद्भाव र एकताको अपरिहार्यता : राष्ट्रपति
कुलमानको आक्रोशपछि त्रिशुली थ्री बी हब सबस्टेशन निर्माणको काम सुचारु
बुटिक एयरपोर्ट बनाउन २३ करोड खर्चिदै
मदनका विचारलाई विकसित गर्ने कि दोहोर्‍याउने ? : प्रचण्ड
मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ : गृहमन्त्री थापा
मदन भण्डारीले जे भन्नुभयो, त्यही अन्तिम होइन : प्रधानमन्त्री ओली
सञ्चालनमा आयो माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’
चेक बाउन्समा इटहरी सबैभन्दा अगाडि
लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषमा
एमालेका नेतालाई लाइन लाएर प्रधानमन्त्री बनाउने मै हुँ : प्रचण्ड
बिहेको तयारीमा रहेकी युवती मृत अवस्थामा फेला
मेलम्चीको बाँकी काम तत्काल सुरु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
विकासको नयाँ मोडल खोजी गरौँ : अध्यक्ष प्रचण्ड
बेरोजगारलाई यसैवर्ष एक महिनाको रोजगारी, कुन स्थानीय तहमा कति अनुदान ?
नेपाल र कम्बोडियाबीच व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी
आँधी पीडितका लागि प्रदेश १ ले दियो एक करोड
एपेक बैठक : चीन – अमेरिका विवादले घोषणापत्र जारी भएन
पपुआ न्यू गिनी, २ मङ्सिर । पपुआ न्यू गिनीमा विश्वका नेताहरुको कटुतापूर्ण देखिएको एपेकको शिखर बैठकले अन्ततः संयुक्त घोषणापत्र जारी नगरी समाप्त भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद फेरि सतहमा आएको छ ।
गिनीको पोर्ट मोर्सबीमा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को दुई दिने शिखर बैठक भएको थियो । बैठकमा एपेकका २१ सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । अधिकारीहरुका अनुसार चीन र अमेरिकाबीच मुख्यगरी विश्व व्यापार संगठनको भूमिकाका बारेमा उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिएको थियो ।
सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका पपुआ न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओ–निलले अध्यक्षको वक्तव्य मात्र जारी गर्नुभएको थियो ।
ठूलो संख्यामा उपस्थित पत्रकारहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै ओ–निलले भन्नुभयो – चीन र अमेरिकाबीचको तनावका कारण विश्व नै चिन्तित छ । प्रधानमन्त्री ओ–निलले नेताहरुको विवादले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक हुन नसकेको र त्यसबाट आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा दुःख लागेको बताउनुभयो ।
एपेक स्थापनाको २९ वर्षमा पहिलोपटक नेताहरुले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा यही समूहको नियन्त्रणमा छ ।
एपीले फेला पारेको मस्यौदा घोषणापत्रमा चीनको अनुचित व्यापारिक अभ्यासका विरुद्धमा कडा शब्द राख्नुपर्ने अमेरिकी माग थियो । तर, चीनले भने अमेरिकी संरक्षणवादको विरोध गर्न चाहेको थियो ।
यसै वर्षमात्र संयुक्तराज्य अमेरिकाले २५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामानमा करवृद्धि गरेको छ । प्रतिशोध स्वरुप चीनले पनि अमेरिकी वस्तु तथा सेवामा करवृद्धि गरेको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सम्मेलनका क्रममा व्यापारका बारेमा भिन्न धारणा आउने कुरामा आफूलाई आश्चर्य नलागेको बताउनुभयो ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङले शनिबारको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दा एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउनुभएको थियो ।
उपराष्ट्रपति पेन्सले सी र चीनप्रति सहानुभूति राखे पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको, जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गरेको तथा अनुचित व्यापारिक शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले विकासशील मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका नाममा ऋण दिएर चीनले अरु देशलाई ऋणको जालोमा पारेको आक्षेप समेत लगाउनुभयो ।
राष्ट्रपति सीले अमेरिकी संरक्षणवादले पारस्परिक सहयोगलाई रोकेको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यापार संगठनलाई आफ्ना निहित स्वार्थी एजेन्डा पूरा गर्ने संस्थाका रुपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो । रासस
दुई विद्यार्थीले गरे अन्धाधुन्ध गोली प्रहार
मस्कोमा एक विमानमा आगलागी हुँदा ४१ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । निलम्बित सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारको कम्पनी
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंको टोखाबाट गोली हानेर काले
काठमाडौं । पार्टी एकीकरण भएको एक बर्षपछि नेकपा
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच
धादिङ । धादिङको आदमघाटबाट त्रिशूली नदीमा बस खस्दा